fahasalamana, Ny fahasalaman'i Neny, interesnenkoe / From Poster
Ny "Surya Namaskara" dia angamba ny velarantany malaza indrindra amin'ny asanas maraina, izay ampiasain'ny olona eran-tany. Ny anarany aza dia midika hoe "mankasitraka ny masoandro". Io teknika yoga io dia manatsara ny fampidiran-dra sy ny lymph, mampitombo ny fahamalinana, mampifoha sy maneno ny rehetra
Inona no tokony hatao amin'ny sendran'ny renim-pianakaviana reraka?
fahasalamana, Ny fahasalaman'i Neny / From Poster
Ny reraky ny ray aman-dreny dia zavatra mamitaka. Etsy andaniny, reraka ny ray aman-dreny rehetra, io ihany no 24 / 7 asa tsy vita andro. Nefa, etsy ankilany, nalaina tamin'ity reraka ity ny hanaisotra azy, toy ny olon-drehetra toy ity, tsy misy maty, ny renintsika fa tsy amin'ny ...
Ny fahasalaman'ny zaza no teraka
fahasalamana, Baby Health, Ny fahasalaman'i Neny / From Poster
Amin'ny taonjato faha-21, ny fanafody dia mamela ny vehivavy hifidy ny fomba hahaterahan'ny zanany: ny fiterahana voajanahary, ny fizarana sesareana, ny fanentanana amin'ny oxytocine ary na dia ny fiterahana aza ao anaty rano na miaraka amin'ny doula. Ireo fomba telo voalohany dia mifandray mivantana amin'ny fahasalaman'ny zaza.
Adim-panafody ho an'ny karbaona mavitrika: ahoana no tsy handratra ny fahasalamanao?
Ny karbôna tafiditra ao amin'ny molotry ny maro ankehitriny. Tsy tapitra ny andro nijanonany tao anaty kitapo voalohany ho fanafody ho an'ny aretim-pivalanana. Ankehitriny dia tandindona vaovao momba ny sakafo sy ny cosmetology. Ny endriky ny "loko misaona" avy amin'ny tànan'ny mpamaham-bolongana sakafo dia niditra an-tsokosoko
Ny taolana amin'ny tongotra dia tsindriana ary very, ny arthrosis ny tongotra dia tsy manelingelina intsony! Ny renibeny dia nanamafy izany karazam-barotra izany.
Ny vadiny dia miverina any an-trano rehefa misasakalina, ary eo amin'ny tokonam-baravarana ny vadiny dia mihaingo vy fanosotra ... Heverinao ve fa misy anecdote? Tsy misy na inona na inona! Ny vady fotsiny dia mahafantatra ny tombony amin'ny fampiasana azy amin'ny saka hoditra. Ny fampihetseham-batana sy ny fanatontosana amin'ny pensilihazo dia tsy lamaody. Misy ny adin-tsainy, saingy indray mandeha
Fitrandrahana solika ao amin'ny capsules: tombotsoa ho an'ny vehivavy ary fampiasana araka ny tokony ho izy. Nahoana ny menaka trondro no ilaina amin'ny vehivavy?
Ny fanamafisana ny fisakafoanana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny dia iray amin'ireo fironana tsara indrindra amin'ny fotoanantsika. Tsy azo antsoina hoe panacea ho an'ny aretina ny capsules ho an'ny solika, fa singa ilaina amin'ny sakafo. Ny tombontsoa azo avy amin'ny capsules ho an'ny solika ho an'ny vehivavy sy ny zaza dia tena lehibe. Inona izany -
Tombantombana miavaka amin'ny voankazo miavaka iray: fampiharana ny karazan-tsakan'i Md Jean miaraka amin'ny tombony. Fifandirana momba ny karazana sainan'i St. John sy ny fahasimban'ny fahasalaman'ny zavamaniry
Ny fanasitranana ireo zavamaniry toy ny karazana St. John dia hita na dia tamin'ny andro fahiny aza. Ny bozaka dia nampiasaina hiarovana amin'ny fanahy ratsy, fitondrana aretina isan-karazany sy aretina mafy. Ny siansa maoderina dia nahafahana nahita sy nanamontsana ny lisitra ilaina